Ny GTK New New Theme GNOME dia vonona amin'ny fitsapana
Alefaso ny sainao hiverina amin'ny volana Desambra ary, ao anatin'ireo baoritra sy taratasy fametahana rehetra, dia mety hitadidy antsika ny fizarana sary sasany amin'ny dikan-teny maimaim-poana amin'ny tetikasa Adwaita GTK, ampiasain'ny GNOME. Ankehitriny, i Matthias Clasen, GNOME, dia nandany ny voany tamin'ny famelomana. Ao anatin'ny …
'Celluloid' no anarana vaovao an'ny GNOME MPV
GNOME MPV - ny GTK UI ho an'ny fitaovana fanalahidin'ny Linux video mpilalao - dia nomena anarana vaovao. Ny fampihetseham-peo mivantana amin'ny open-source dia miala amin'ny 'GNOME MPV' mpiloka mankany 'Celluloid'. Nahoana? Satria 'GNOME MPV' dia somary tsy mamaritra azy, tahaka ny GNOME ...
Ary avy eo dia rava izy ireo: GNOME dia mamerina miverina any anaty ala ho an'ny faka-doko
Ny fampandrosoana dia tontolo mandrakizay, miovaova sy mihetsiketsika, izay ahafahan'ny fiovana manomboka haingana toy ny nanaovana azy. Raharaha farany amin'ity herinandro ity? Fikoranana iray manintona ny u-turn - niteny tamim-pitaka, fandrao hampihorohoro anao - amin'ny alalan'ireo mpanakanto GNOME, izay naverina niverina tany anaty ordinatera marobe ...
Ahoana no hanovana ireo lohahevitra ao amin'ny Linux Mint Cinnamon - Tutorial
Ahoana no hanovana ireo lohahevitra ao amin'ny Linux Mint Cinnamon - Tutorial Updated: November 14, 2018 Nahita olana mahaliana sy mahakivy aho rehefa nandinika ny Linux Mint 19 Tara. Raha ny marina, ny famoahana Cinnamon avy amin'io distro io dia mampiasa ny lohahevitra miresaka momba ny "Mint-Y" vaovao. Na dia tsara tarehy aza, dia ratsy ihany koa izany. ...
Ahoana ny fomba ahafahana manova ny alàlan'ny tenimiafina taloha ao amin'ny Ubuntu 18.10
Ubuntu 18.10 dia navotsotra tamin'ny lohahevitry ny birao vaovao 'Yaru'. Na izany aza, misy foana ny olona sasany mijery ny bika aman'endrin'i Ubuntu taloha. Ary mora ny mamerina indray ny loha-desktop taloha ao amin'ny Ubuntu 18.10 amin'ny alalan'ny dingana manaraka. 1. Sokafy ny terminal amin'ny alalan'ny alalana Ctrl + Alt + T na amin'ny alalan'ny ...
Ampio ny bokotra 'Show Desktop' ao amin'ny Ubuntu 18.10, 18.04
Ity lesona haingana ity dia hampiseho anao ny fomba hanampiana ny sehatra 'Show Desktop' ho any amin'ny rindrina an-dakana havia ao Ubuntu 18.10 na Ubuntu 18.04. Ny bokotra 'Show Desktop' dia navotsotra hatramin'ny niantsoana an'i Ubuntu tao amin'ny Gnome 3 Desktop. Hanampy izany indray, afaka mamorona tanana ianao ...
[Quick Tip] Manaova fanamafisam-peo an-tambajotram-pifidianana ho an'ny Ubuntu 18.04
Ho an'ny birao Desktop Gnome Ubuntu 18.04, ity lesona haingana ity dia hampiseho anao ny fomba fampifandraisana ny varavarankely ampiasaina amin'ny rindrankajy ambony, amin'ny alàlan'ny fanesorana ny baoritra, ary mampihetsika ny lohateny sy ny bokotra eo amin'ny tontonana ambony. Ny asa rehetra dia azo atao amin'ny alalan'ny ...
Fomba fanao 4 azonao atao ny mijery Xfce ankehitriny
Xfce dia tontolo milamina mavesa-danja ary misy disadisa iray. Toa efa antitra io. Saingy tsy voatery hifikitra amin'ny fomba fijery tsy miova ianao. Andeha hojerentsika ny fomba isan-karazany azonao anaovana ny Xfce mba hanomezana azy ny fomba fijery maoderina sy tsara. Manomboka amin'ny Xfce ny ...
Ahoana ny fametrahana ny New Ubuntu Theme 'Yaru' ao Ubuntu 18.04
Yaru no sehatra vaovao Ubuntu izay hampiasaina ho toy ny fanamarihana amin'ny famoahana Ubuntu manaraka. Yaru, izay antsoina hoe "Communitheme" tany am-piandohana, dia mifototra amin'ny lohahevitra GNOME Adwaita. Ny loha-hevitra vaovao dia misy ny theme GTK3, loha-hevitra shell, ary loha-hevitra icon. Ary i Ubuntu 18.10 dia hiara-dia amin'ny ...
5 Fiovana goavana tonga ao Nautilus 3.30
Files - ny mpitantana malaza FOSS? Maro ny fanatsarana lehibe mankany amin'ny Nautilus, na koa ny rakitra, na ny mpitantana ny lahatahiry ao am-pon'ny tontolo Desktop GNOME. Ny Nautilus 3.30 dia hanolotra karazan-dàlana hanavaozana, baikon'ny fitaovana vaovao, ary hanatsara ny fanohanana rehefa ...
Efa nomena anarana vaovao ny 'Communitheme' Ubuntu
Ny nomerao vaovao Ubuntu dia nomena anarana vaovao antsoina hoe Canonical dia nifidy ny teny japoney hoe "Yaru" ho toy ny solontenan'ny mpisolo toerana ho an'ny "Communitheme" (mazava ho azy fa malaza). Ny Canonical dia nisafidy ny teny Japoney hoe "Yaru" ho toy ny fanoloana ny anarana "Communitheme" Nameno ny tena GTK ...
Ny fomba hanamafisana ny fehin-kevitry ny bokotra Gnome Shell
Ny fidirana amin'ny lisitr'ireo fametahana klavye amin'ny rafitra ao amin'ny Gnome Shell dia tena tsotra, raha ampitahaina amin'ny tontolon'ny bureau. Raha hijery ny lisitry ny famandrihana fichier amin'ny Gnome Shell, tsindrio ny bokotra Windows eo amin'ny klavinao mba hanokatra ny meni-fikarohana. Soraty ao ny fikarohana "keyboard".
Ny Nifty Dozen: 12 fanao mahazatra ao amin'ny Ubuntu MATE
Tsy maintsy miaiky aho, tsy dia faly loatra tamin'ny zavatra niainako niaraka tamin'ny Ubuntu MATE 18.04 hatreto. Ny tiako holazaina dia marina avokoa izany rehetra izany, saingy be loatra ny bibikely, olana be loatra, ary na dia ny fianjeran'ny fampihorohoroana aza, izay tsy misy na dia kely aza.
Fehiny: Ity lisitr'ireo zavatra tokony hatao taorian'ny fametrahana Ubuntu 18.04 dia manampy anao hanomboka amin'ny Bionic Beaver ho an'ny Desktop Desktop. Ubuntu 18.04 Bionic Beaver no mamoaka androany. Efa fantatrao angamba ireo endri-javatra vaovao ao amin'ny famoahana Ubuntu 18.04 LTS. Raha tsy izany, eto ...
Alefaso 'Theme shell' amin'ny gnome tweak Tool in Ubuntu
Ity lesona haingana ity dia hampiseho ny mpilalao Gnome Desktop amin'ny fomba famelomana ny banga "Shell theme" ao amin'ny Tool Gnome Tweak. Ny loha-hevitra Gnome Shell dia manova ny bokotra, ny lokony, ny takelaka, sns. Ny tranokala dia tsy mety amin'ny GNOME Tweak Tool, ary hahita ianao ...
Mametraka ny 'App something for Reddit' ao Ubuntu ny Reddit Gnome App
Ny zavatra ho an'ny Reddit dia loharanom-baovao Reddit misokatra ho an'ny GNOME, naorina ho an'ny fikitihana, ny sasao ary ny klavin'ny VIM. Ny fampihetseham-bolo tsotra dia manana lohahevitra maizina sy mazava, tranokala fananganana ary: Touchscreen notsaboina ny interface VIM style keybindings Jereo ny subreddits, fanamarihana ary ny pejin'ny mpampiasa Vote on comments and links, ...
Ahoana ny fametrahana ireo rindrankajy GNOME mampiasa Google Chrome na Vivaldi
Te-hametraka GNOME Extensions amin'ny Google Chrome na Chromium ve ianao? Eny, hampiseho aminao ny fomba. Ny fanitarana GNOME dia fomba lehibe hanitarana, hanitsiana na hampifanaraka ny traikefanao GNOME Shell mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Mora ny mametraka GNOME Extensions amin'ny ...
Ampiasao ny Theme Icon Papirus Ao amin'ny Ubuntu 16.04
Ahoana ny fametrahana Theme Papirus Icon amin'ny Ubuntu 16.04. Ny Papirus Icon dia nalaina avy amin'ny Theme Icon Paper Theme nataon'i Sam Hewitt. Ny loha-hevitra icon dia natao hiara-miasa amin'ny Unity, GNOME, Cinnamon ary faritra hafa manodidina ny biraon'ny GTK +. Azo alefa ihany koa ny solosaina ho an'ny mpampiasa KDE. Hametraka ...
Fampahalalana Ping: GNOME Shell Extension
Raha tadiavinao endri-tsoratra tsotra iray mampiseho ny vokatra ping eo amin'ny tontonana ambony ao amin'ny GNOME, dia ny Ping Indikator (amin'ny trifonovkv) no tena fanitarana Shell ho anao. Tena tsotra izany, fa maneho anao foana ny sandam-bokin'ny baiko ping amin'ny toerana iray manokana. ...
EasyScreenCast: GNOME Shell Extension ho an'ny horonantsary Recording + Audio
Tianao ve ny mamorona video tutorials? Mampiasa GNOME 3 ve ianao? Avy eo dia ampiasao ny extension extension EasyScreenCast mba hanoratana ny efijery sy ny feonao, amin'ny lahatsary amin'ny fanindriana bokotra eo amin'ny tontonana ambony. Ny feo mahaliana? Andeha hampiseho aminao ny fomba. 1. ...
1 2 3 4 ... 10 Manaraka
Google dia manampy ny 'Search Apt' amin'ny Chromeon App Launcher
04 fitaovana command line IP adiresy "PC One ' Malagasy Bible SEO Samsung Windows Phone iPhone fifamoivoizana Linux Mint famerenana Time Windows 10 web browser Ubuntu 14.04 Command Support Microsoft Fitaovana finday OS X Plugins MySQL raki-daza Apple Watch finday avo lenta toe-tsaina Linux Ubuntu Systems Plugin File tahirin-kevitra Screen famotsorana PPA Phone fitaovana Video Apache Android Bing PDG Chrome Company Apps taona Twitter fitaovana finday Nginx HTML Firefox lalao windows update bilaogy Server Facebook rindrambaiko CentOS SSD 10 vaovao farany Ubuntu 14.10 Unité centrale Rafitra fikirakirana hametraka Ubuntu (rafitra fandidiana) PHP Linux nbsp CentOS 7 YouTube bilaogy fitaovana endri-javatra Debian Ubuntu 16 lalao app store fanamarinana USB web server GNOME Microsoft Windows Up " Database MAMAKA HTTP Cortana fikarohana ubuntu 15.04 paoma Toetoetra rafitra API afa-po WordPress HTTPS SSH Google takelaka fikirakirana Samsung Galaxy Unix Windows haino aman-jery sosialy 'App Windows 8 ram Users Ubuntu loharano misokatra